Ilay fanafoanana ny tsena isan-kerinandro
2021-04-22 @ 21:19 in Andavanandro
Ny mampaky teto dia mahafantatra fa izaho izay manoratra dia nitaky ny hanafoanana ny tsena mandehandeha ao Antananarivo. Efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana intsony io sady manelingelina tanteraka ny fifamoivoizana izay efa tery dia tery.
Amin'izao dia azo lazaina fa tontosa izany izay notakiako fa noho ny hamehana tsy hielezan'ny valan'aretina no nahatonga izany. Ny notakiako tamin'izany fotoana izany dia samy manana toeram-pivarotana raikitra ny mpivarotra ary amin'ny trano miorina mafy sy manana toeram-pidiovana ho azy tahaka ny amin'ny trano fonenana ihany izany.
Ny zavamisy amin'izao fotoana izao dia mikatona avokoa ny fivarotana rehetra amin'ny andro hanondroana ilay toerana ho tsena: talata rehefa eny Besarety, alarobia rehefa ao Andravoahangy, asabotsy rehefa isotry izay tonga hatrany ambodin'isotry. Ny mampalahelo amin'ilay izy amin'izao fotoana izao dia tsy misy mahazo misokatra na dia ireo manana fivarotana ao anaty trano aza, fa noho ny hamafisan-dohan'ny olona dia voatery mikatona hatramin'ireny aloha.
Manararaotra aho ny manoratra hoe tahaka ny ahoana ary ilay tanàna tsy misy tsena isan-kerinandro e? Toa gaga daholo ny olona fa milamina ilay tanàna? Hanao ahoana ary raha heverina amin'izay hoe foanana tanteraka ny tsena isan-kerinandro ho an'Antananarivo? Izay mpivarotra eo amin'ny toerana anaty fonenana ihany no avela hivarotra fa ny hafa rehetra kosa tsy maintsy mikaroka ny toerana hivarotany maharitra sy isan'andro?
Fa misy kosa ny toerana iray izay toa tsy mety ho voafehy dia ny manomboka amin'ny Building Ramaroson teo aloha mizotra mankany amin'ny Gauloise hatreny amin'ny farihin'i Behoririka. Iny no mariky ny fikorontanana ateraky ny fivarotana anaty arabe sy amin'ny sisindalana. Tsy maintsy masiaka satria fihoaram-pefy efa tsy azo ekena intsony ny amin'iny toerana iny.
Fepetra tokony horaisina amin'iny dia akatona tanteraka ao anatin'ny iray volana tahaka ny atao amin'ny tsena isan-kerinandro ny fivarotana rehetra ary mila fifanarahana vaovao amin'ny Kaominina fa tsy hanaiky ny hametrahana na ipetrahan'ny mpivarotra manoloana ny fivarotana fa mikatona tanteraka avy hatrany tsy misy fahafahana mivoha intsony raha vao tratra manaiky ny fisian'ny mpivarotra amoron-dalana eo anoloan'ny fivarotany. Tsotra no anton'izany: malaza fa ry zareo ihany no mpamatsy entana ireo mpivarotra eo anoloany ireo.
Dia ilazao ihany raha mahita hevitra hafa ianareo fa izay aloha ny hevitro hampisy filaminana ny fiainana sy ny fifamoivoizana ao Antananarivo renivohitra.